Ikhabethe elise-Maple View - (Sivuliwe!) - I-Airbnb
Ikhabethe elise-Maple View - (Sivuliwe!)
472 okushiwo abanye
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jared
U-Jared Ungumbungazi ovelele
Ikhabhinethi elise-Maple View isendaweni eyikota yemayela ukusuka kuthelawayeka wehla ngomgwaqo omude osontayo. Ihlehle emahlathini futhi kude nakho konke. Ubona ubuciko be-Amish ngokushesha nje lapho ufika. Uzungezwe amahektha angama-80 ezinkuni ezigayiwe kanye negceke elikhulu. Imvelo iyakwamukela. Umkhathi ufudumele. Ibize ikhaya lakho ubusuku bonke noma ukuhlala isikhathi eside. Yinhle noma ngabe yisiphi isikhathi sonyaka.
Ikhabhinethi eku-Maple View ingahlalisa izivakashi ezingu-4 (isivakashi esiyisi-6 esinombhede noma umatilasi oqhumayo) futhi ilungele izilwane ezifuywayo inqobo nje uma isilwane sakho esifuywayo sisaziphatha =).
Ikamelo lokulala linombhede onethezekile, olingana nendlovukazi kanti igumbi lokuphumula linepulangwe eyifuton ewusayizi ogcwele. Ikhishi lifika ligcwele izinto zikagesi kanye nazo zonke izitsha ongazilindela ekhaya lakho. Kukhona i-Wi-Fi kuyo yonke indawo, i-TV eneziteshi ezingu-200, umsakazo we-bluetooth, indawo yokucima umlilo yangaphandle, indawo yokuzivocavoca yasendlini enosayizi ogcwele, imizila engamamayela amathathu ehlathini kanye nokuzola kokuba kude nakho konke.
4.99 out of 5 stars from 472 reviews
4.99 · 472 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-472
Usendaweni enhle, yasemaphandleni yase-Ohio. Lesi sigaba se-Champaign County Ohio siyingxube yezindawo zokulima, izinkuni kanye nezigodi ezinoqhwa. Kuphephe ngokuphelele futhi abantu abahlala lapha bangabahle kakhulu oyoke uhlangane nabo. Thatha uhambo lokuya ezweni ngaphambi kokuthi uhambe futhi uhlole eminye yemigwaqo engemuva ukuze uthole umbono wobuhle nokuma kwendawo. Ikhabethe elise-Maple View litholakala kalula nje ngemizuzu eyi-10-15 ukuya ezindaweni zokudlela nezitolo.
Ngizoxhumana nawe ngaphambi kokufika kwakho futhi ngitholakale ukuze ngikusize uma kudingeka kukho konke ukuhlala kwakho. Uma ngingakwazi ukuhlangana nawe lapho ufika, ngizokuthinta nganoma yimiphi imininingwane ebalulekile ngocingo noma ngombhalo.
Ngizoxhumana nawe ngaphambi kokufika kwakho futhi ngitholakale ukuze ngikusize uma kudingeka kukho konke ukuhlala kwakho. Uma ngingakwazi ukuhlangana nawe lapho ufika, ngizokuthint…
UJared Ungumbungazi ovelele